Ra’iisul wasaarihii hore Cali Maxamed Geeddi oo boggaadiyey dib u heshiisiin ay dowladda hoggaaineyso. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ra’iisul wasaarihii hore Cali Maxamed Geeddi oo boggaadiyey dib u heshiisiin ay...
Ra’iisul wasaarihii hore Cali Maxamed Geeddi oo boggaadiyey dib u heshiisiin ay dowladda hoggaaineyso.
Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geeddi oo ka soo qeyb-galay shirweyaha wadatashiga hannaanka dib u heshiisiinta , ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay la yimaadaan is cafin dhab ah oo ku aaddan Soomaali mideysan.
“shirweyne Soomaaliyeed oo lagu xuso madaxdii hore ee dalka waa qeyb ka mid ah db u heshisiinta Soomaaaliyeed, waxaan uga mahadcelinayaa dhabbaha ay qaadday dowladda Federaalka Soomaaliya macdammaa ay bilowdey in ay la tashato dadweynaha Soomaaliyeed” ayuu yiri Cali Maxamed Geeddi.
Ra’iisul wasaarihii hore ayaa sheegay in loo baahan yahay is cafin, hanta isu-celin iyo in beelaha Soomaaliyeedna ay si dhaqan ah uga qeyb-qaataan arrimaha dib u heshiisiinta, waxa uu tilmaamay in ay run tahay inaan wada ogaanno sida Soomaalida ay ugu sahlan tahay in ay heshiiyaan, waxa uu ugu baaqay shacabka Soomaaaliyeed in ay fahmaan oo ay taageeraan dib u heshiisiinta, isla markaana ay ka qeyb-qaataan.
Ra’iisul wasaarihii hore Cali Maxamed Geeddi ayaa Dowladda Soomaaliya ugu baaqay in xuquuqda caasimadda la helo oo dadka deegaan xuquuqdooda siyaasadeed iyo matalaaaddooda dib loo siiyo, ayna ku imaan karto maqaamka Muqdisho oo la nidaamiyo, taas oo uu xusay in ay qeyb ka tahay dib u heshiisiinta ummadda.
Guddoomiyaha gobolka Benaadir ayuu ku ammaanay sida uu maamulkiisa uga qeyb-geliyey bulshada Soomaaliyeed ee deegaannada kale dalka deggan, waxa uu ku tilmaamay in ay tahay bilow fiican.
Previous articleAKhriso khudbadaha shirweynaha Wadatashiga hannaanka dib u heshiisiinta ee Muqdisho ka furmay
Next articleWafdi uu hogaaminayo Wasiirka Dastuurka oo lagu soo dhaweeeyay Garoowe